မှားယွင်းပြီး သုံးစွဲတတ်သည့် (Any and Some, All and Every)
တိကျရေရာမှုမရှိတဲ့ အတိုင်းအဆ(သို့) အရေအတွက်ကို ပြောတဲ့အခါ any နဲ့ some ကို သုံးပါတယ်။ “အချို့၊ အနည်းငယ်၊ နည်းနည်း” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ လူအချို့၊ ငွေအနည်းငယ်၊ သကြားနည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်း စသည်ဖြင့် ပြောဆိုတဲ့အခါ သုံးတတ်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတိထားစရာတစ်ချက်က any နဲ့ some ဟာ အဓိပ္ပါယ်တူပေမယ့် some ကိုအဖြေဝါကျ (affirmative clauses) တွေမှာသာ သုံးပြီး any ကိုတော့ မေးခွန်းဝါကျနဲ့ အငြင်းဝါကျ (questions and negative clauses) တွေမှာသုံးတာ တွေ့ကြပါ တယ်။ လွယ်ပေမယ့် သတိထားသုံးရမယ့် စကားလုံးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးအနှုန်းကွဲပြားပုံကို လေ့လာ ကြည့်ပါဦး။
Recommended for you - စာဖတ်ခြင်းက သင့်ကို ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေ ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ
I need some pencils. (အဖြေပုံစံ)
(I need any pencils ဟု မရေးရပါ)
Have you got any pencils? (မေးခွန်းပုံစံ)
မင်းခဲတံ တစ်ချို့ ရပြီးပြီလား။
Sorry, I haven’t got any pencils. (အငြင်းပုံစံ)
ဟင့်အင်း၊ ကျွန်တော်ခဲတံ တစ်ချို့ မရသေးဘူး။
Recommended for you - အခွင့်အရေးတွေ လက်တစ်လုံးခြား ဆုံးရှုံးနေတာလား
Every ဟာ တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း၊ တစ်ခုချင်းစီကို ဆိုလိုတာပါ။ “အားလုံး၊ တိုင်း” လို့ ဘာသာပြန် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်း၊ ကျေးရွာတိုင်း၊ မြို့တိုင်း စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး သုံးပါတယ်။ သဒ္ဒါသဘော အရပြောရရင် Every ရဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ noun က အနည်းကိန်း ဖြစ်ရပါမယ်။
Every children need love. (အမှား)
Every child needs love.(အမှန်)
All ရဲ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းကို အားလုံးတိုင်း၊ ဟူသရွေ့ လို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိန်းမအားလုံး၊ ယောက်ျားအားလုံး၊ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး စသည်ဖြင့် ဆိုလိုတာပါ။ အဓိပ္ပါယ်သဘောသိပြီးလို့ သဒ္ဒါရှုထောင့်အရ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါ all ရဲ့နောက်မှာ လိုက်တဲ့ noun ဟာ ရေတွက်လို့ ရတဲ့နာမ် (countable noun) ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အများကိန်းပုံစံနဲ့ လိုက်ရပါတယ်။
All the light was out. (အမှား)
All the lights were out. (အမှန်)
တိကရြရောမှုမရှိတဲ့ အတိုငျးအဆ(သို့) အရအေတှကျကို ပွောတဲ့အခါ any နဲ့ some ကို သုံးပါတယျ။ “အခြို့၊ အနညျးငယျ၊ နညျးနညျး” လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ လူအခြို့၊ ငှအေနညျးငယျ၊ သကွားနညျးနညျး၊ ဆားနညျးနညျး စသညျဖွငျ့ ပွောဆိုတဲ့အခါ သုံးတတျကွပါတယျ။
ဒီနရောမှာ သတိထားစရာတဈခကျြက any နဲ့ some ဟာ အဓိပ်ပါယျတူပမေယျ့ some ကိုအဖွဝေါကြ (affirmative clauses) တှမှောသာ သုံးပွီး any ကိုတော့ မေးခှနျးဝါကနြဲ့ အငွငျးဝါကြ (questions and negative clauses) တှမှောသုံးတာ တှကွေ့ပါ တယျ။ လှယျပမေယျ့ သတိထားသုံးရမယျ့ စကားလုံးတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ အသုံးအနှုနျးကှဲပွားပုံကို လလေ့ာ ကွညျ့ပါဦး။
Recommended for you - စာဖတျခွငျးက သငျ့ကို ဘယျလိုထူးခွားတဲ့စှမျးအငျတှေ ပေးနိုငျတယျလို့ထငျပါသလဲ
I need some pencils. (အဖွပေုံစံ)
(I need any pencils ဟု မရေးရပါ)
Have you got any pencils? (မေးခှနျးပုံစံ)
မငျးခဲတံ တဈခြို့ ရပွီးပွီလား။
Sorry, I haven’t got any pencils. (အငွငျးပုံစံ)
ဟငျ့အငျး၊ ကြှနျတျောခဲတံ တဈခြို့ မရသေးဘူး။
Recommended for you - အခှငျ့အရေးတှေ လကျတဈလုံးခွား ဆုံးရှုံးနတောလား
Every ဟာ တဈဦးခငျြး၊ တဈယောကျခငျြး၊ တဈခုခငျြးစီကို ဆိုလိုတာပါ။ “အားလုံး၊ တိုငျး” လို့ ဘာသာပွနျ ဆိုနိုငျပါတယျ။ နိုငျငံတိုငျး၊ ကြေးရှာတိုငျး၊ မွို့တိုငျး စသညျဖွငျ့ အဓိပ်ပါယျအမြိုးမြိုး သုံးပါတယျ။ သဒ်ဒါသဘော အရပွောရရငျ Every ရဲ့နောကျကလိုကျတဲ့ noun က အနညျးကိနျး ဖွဈရပါမယျ။
Every children need love. (အမှား)
Every child needs love.(အမှနျ)
All ရဲ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုနျးကို အားလုံးတိုငျး၊ ဟူသရှေ့ လို့ ဘာသာပွနျဆိုနိုငျပါတယျ။ မိနျးမအားလုံး၊ ယောကျြားအားလုံး၊ အဖှဲ့အစညျးအားလုံး စသညျဖွငျ့ ဆိုလိုတာပါ။ အဓိပ်ပါယျသဘောသိပွီးလို့ သဒ်ဒါရှုထောငျ့အရ ပိုငျးခွားစိတျဖွာကွညျ့တဲ့အခါ all ရဲ့နောကျမှာ လိုကျတဲ့ noun ဟာ ရတှေကျလို့ ရတဲ့နာမျ (countable noun) ဖွဈတယျဆိုရငျ အမြားကိနျးပုံစံနဲ့ လိုကျရပါတယျ။
All the light was out. (အမှား)
All the lights were out. (အမှနျ)
သင့်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကို နုပျိုစေပြီး ထက်မြက်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
ဆယ်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူးထွက်ရုံနဲ့ ဘဝခရီးလမ်းမှာ အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာလား